Dad lagu qabqabtay howlgal laga sameeyay Beledweyne kadib weerar ka dhacay | Banaadir Times
HomeUncategorisedDad lagu qabqabtay howlgal laga sameeyay Beledweyne kadib weerar ka dhacay
Ciidamada Booliska Magalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa waxaa ay sameeyeen howlgallo kala duwan oo ay kusoo qabteen dad lagu tuhmayo inay falal amni darro ka geysteen Magaalada Beledweyne.
Howlgalka ayaa waxaa auu yimid kadib markii weerar mab gacmeed lagu tuuray Maqaaxi ay ku sugnaayeen Ciidamada Macawsileyada ah, waxaana weerarkaas ku dhaawacmay Afar kamid ah ciidamada, kuwaas oo dhaawacooda la geeyay Isbitaalka Magaalada.
Ciidamada ayaa howlgalkooda waxaa ay sigaar ah uga fuliyeen xaafada uu weerarka ka dhacay ee howl-wadaag, waxaana dadka la qabtay la geeyay Saldhiga Booliska Beledweyne wallow badi dadkaasi la siidaayay.
Majirta wax war ah oo kasoo baxay Laamaha Amaanka oo ku aadan weerarka marka laga reebo howlgalka dadka lagu qabqabtay oo ay Ciidamada sameeyeen, waxaana xaafada howlwadaag ee Magaalada Beledweyne dhowr jeer ka dhacay weeraro kala duwan.
Previous articleRa’iisul Wasaare Rooble oo ku baaqay in loo Midoobo la dagalaanka Al-Shabaab
Next articleSheekh Shariif & Xasan Sheekh oo ka wada hadlay dhameystirka heshiiskii Musharixiinta & Rooble